फागुन ११ गते आफ्नो जन्मस्थल जाँदै प्रधानमन्त्री ओली « Dhankuta Khabar
फागुन ११ गते आफ्नो जन्मस्थल जाँदै प्रधानमन्त्री ओली
प्रकाशित मिति : 14 February, 2020
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ६९ औं जन्म दिन मनाउन जन्मस्थल तेह्रथुमको आठराई जाने भएका छन् । फागुन ११ प्रधानमन्त्री ओली धर्मपत्नी राधिका शाक्य र केही निकट व्यक्तिलाई लिएर जन्मदिन मनाउन जन्मस्थल तेह्रथुमको आठराई जाने तय भएको हो।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीले जन्मदिन मनाउने क्रममा के–के गर्ने भन्ने विवरण खुलासा भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली हेलिकप्टरमार्फत जन्मस्थल जाने, त्यहाँ आफ्नो जन्म दिन मनाउने र सोही दिन राजधानी फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली सोही दिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको गृह जिल्ला पाँचथरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम पनि तय भएको नेकपा नेतृ सुनिता बरालले जानकारी दिइन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले ६८ औ जन्म दिन बालुवाटार परिसरमा आँपको विरुवा रोपेर मनाएका थिए।
उक्त दिन गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले केक काटेर बुवा मोहनप्रसाद ओली र पत्नी राधिका शाक्यलाई खुवाएका थिए। गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको जन्म दिनमा बलिउड अभिनेत्री जया प्रदासमेत बालुवाटारमा पुगेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको जन्म २००८ साल फागुन ११ गते शनिबार तेह्रथुम जिल्लाको इवा गाउँमा भएको थियो। २०२२ सालमा कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका ओलीले २०२६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए।
भोलिदेखि काठमाडौं सहित २०० बढी संक्रमित भएको जिल्लामा जोर-विजोर लागू!
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भोलिदेखि निजी र सार्वजनिक
सिबी अधिकारी,काठमाण्डौ । बन्दाबन्दीको झण्डै पाँच महिनापछि सञ्चालन हुनलागेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानका लागि
सरकारको सार्थक पहल : ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुग्यो विद्युत् पहुँच
रमेश लम्साल,काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा देशभरका कूल ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को
गुरुयोजना खारेजीको माग गर्दै पशुपति क्षेत्रमा सांस्कृतिक र्‍याली
काठमाडौ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीयवासी एवं तीनै तहका जनप्रतिनिधिसँग परामर्श नगरी
पशुपति नाथले सबैको कल्याण गरुँन! – हेर्नुहोस् साउन २४ गते…
धनकुटाको जोरपाटीमा अ,स्थायी आधारभूत स्वा,स्थ्य सेवा सुरु
आदिवासी पत्रकारले भर्चुअल प्रविधिबाट स्थापना दिवस मनाउने
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन! – हेर्नुहोस् साउन २३ गतेको…
धनकुटाको चौबिसेमा अस्थायी प्रहरी पोष्टको उद्घाटन
धनकुटामा एक महिलाले गरिन आ,त्म,ह,त्या!
'धनकुटामा जनप्रतिनिधिहरुद्वारा प्रहरी चौकी तो,डफोड' बारे महालक्ष्मीको यस्तो
धनकुटाको छथरजोरपाटीमा प्रहरी चौकी उद्घाटन गरियो
धनकुटामा अपांगको कोटामा नेताका सपांग जागिरे !
तपाइको यो साता कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस् साउन
धनकुटामा 'कागतीको स्तम्भ'मा तस्विर, सबैभन्दा धेरै लाईक पाउनेले